‘मेरो सास कहिले निभ्छ थाहा छैन, सरकार परिवारलाई बचाइदेउ’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
‘मेरो सास कहिले निभ्छ थाहा छैन, सरकार परिवारलाई बचाइदेउ’
जेठ ६, २०७६ सोमबार १३:१२:८ | सन्जिता देवकोटा
मोरङ – पथरीको किराँत चोक । चोकभन्दा अलि तल छ शान्ता बिकको घर । आँगमा बसेर घाम ताप्दै हुनुहुन्छ, शमशेरबहादुर बिक । अनि घाम तापिरहेका श्रीमानलाई हेर्दै टोलाइरहनुभएको छ, शान्ता ।
दुई दिनअघि डाइलायसिस गरेर ल्याएपछि शान्तालाई केही दिनका लागि ढुक्क भएको छ । शमशेर घाममा निस्केर बस्न सक्ने हुनुभएको छ । तर शमशेरलाई ठमठमी हिँड्ने मन छ ।
दुवै मृगौला काम नलाग्ने भएपछि साउदीबाट फर्किएका शमशेरलाई फेरि तन्दुरुस्त हुन पाए के के न गरौंला भन्ने छ । तर त्यसका लागि एउटा मृगौला चाहिएको छ ।
‘मेरो एउटा मृगौला दिन्छु भनेको मिलेन, पत्थरी देखियो, अब कसले देला उहाँलाई मृगौला,’ श्रीमती शान्ताको अनुहारमा छटपटी झल्किन्छ । श्रीमानलाई बचाउन एउटा मृगौला चाहिएको छ । शमशेरका दाजुभाइमध्ये कसैले मृगौला दिन्छन् कि भन्ने आश छ शान्तालाई ।
शमशेरको अनुहार पुरै धुम्मिएको छ । आफ्नो ज्यानको भन्दा पनि उहाँलाई बालबच्चा र छोराछोरीको चिन्ता बढी छ । ‘मलाई केही भयो भने यिनीहरुले के गर्लान्, बिजोग हुन्छ,’ दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेको शमशेरको शरीरलाई यही चिन्ताले थिचेको छ ।
साउदीले खायो शमशेरको दुवै मृगौला
‘बालबच्चा राम्रोसँग बढाउँला, पढाउँला, दुई चारपैसा भविष्यका लागि बचाउँला ।’ यही सपना थियो शमशेरको । २०७० सालमा साउदी गएका शमशेर होटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो । मासिक १२ सय रियालसम्म हुन्थ्यो कमाइ ।
घरमा दुई छोरा बढ्दै थिए । शमशेरले साउदी टेकेदेखि घर उहाँकै कमाइले चलेको थियो । ज्यान सद्दे छँदासम्म त महिना मरेपछि तलब आइहाल्थ्यो । चलेकै थियो । पाँच वर्ष बिते यसैगरी । साउदीमा बितेका वर्षसँगै कहिले दुवै मृगौलाले साथ छाड्यो शम्शेरलाई पत्तै भएन ।
‘अचानक आँखाहरु धमिलो देखें, अनुहार पनि सुन्निएको थियो,’ शमशेरले त्यो दिन सम्झनुभयो, ‘अस्पताल जाँदा त दुवै मृगौला काम नलाग्ने भइसकेको रहेछ ।’
डाक्टरले तत्काल डायलायसिस गर्न भने । खुट्टाबाट गरेको डायलायसिस सफल भएन । पीडा भने असह्य भयो । त्यो बेला त शमशेरलाई बाँच्छु जस्तो नै लागेन । खुट्टाबाट डायलायसिस सफल नभएपछि छातीबाट गरियो ।
पाँच वर्ष साउदीमा बस्दा शमशेरलाई बिरामी परेर अस्पताल जानु परेको थिएन । ‘म त्यस्तो बिरामी त कहिल्यै पनि भइनँ, तर ‘प्रेसर हाइ’ थियो मेरो,’ शम्शेर सुनाउनुहुन्छ, ‘त्यही भएर एक पटक औषधि खाएको थिएँ, त्यति नै हो ।’
जे नहुनु पर्ने त्यो भैसकेपछि के गर्नु र ! डाक्टरले जतिसक्दो चाँडो मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्न सुझाव दिए ।
‘आठ पटक डायलायसिस गरियो, अब नहुने भएपछि के गर्ने, मैले सोचें – मरे पनि आफ्नै ठाउँमा मर्छु, त्यसपछि म्यानेजरलाई जसरी पनि घर पठाइदिनुस् भनें,’ शम्शेर सुनाउनुहुन्छ ।
शमशेरले साउदीमा पाँच वर्ष पसिना बगाउनुभयो । पाँच वर्ष पसिना चुहाएको मूल्य घर चलाउँदैमा ठिक्क भयो । शमशेरले साँचेका सपना पूरा भएनन् । उहाँ २०७४५ पुसमा थलिएको शरीर लिएर घर फर्किनुभयो ।
अस्पतालमा रिपोर्ट देखेपछि मात्र बिरामी भएको थाहा पाएँ
शमशेरले श्रीमती शान्तालाई आफूलाई लिन विमानस्थल बोलाउनुभयो । तर आफ्नो अवस्थाको बारेमा भने भन्नुभएको थिएन । ‘अब बिरामी छु भन्दा के के सोच्छन् घरमा, चिन्ता हुन्छ, त्यसैले मैले आफूलाई भएको रोगको बारेमा भनेको थिइनँ,’ शम्शेर भन्नुहुन्छ ।
शान्ता विमानस्थल पुग्नुभयो । रोगले गालेको कुरा अनुहार हेरेर अड्कल गर्न सक्नुभयो । तर के भयो भनेर सोध्दा शमशेरले भन्नुभएन । जवाफ एउटै थियो, ‘सामान्य बिमार हो, निको भैहाल्छ ।’
‘भोलिपल्ट टिचिङ लगेर गएँ, रिपोर्ट लुकाउनुभएको रहेछ, बल्ल त्यतिबेला पो थाहा पाएँ त दुवै मृगौला काम नलाग्ने भएका कुरा ’ शान्ता भन्नुहुन्छ ।
साउदीमै आठ पटक डायलायसिस गरिसकेकाले जतिसक्दो छिटो मृगौला फेर्न डाक्टरको सुझाव छ । तर कसरी फेर्ने ? कसले दिन्छ मृगौला ? यसको पत्तो शान्तालाई पनि छैन ।
बेस भएन विदेश
३१ वर्ष लागेकी शान्ताको १७ वर्षअघि शमशेरसँग बिहे भयो । शमशेर सुनारको काम गर्नुहुन्थ्यो । एक जनाको कमाइले जसोतसो दुई जनालाई पुग्थ्यो । दुई छोरा जन्मिए । खर्च बढ्यो ।
गाउँघरमा कमाउन भनेपछि विदेश नै जाने परम्परा जस्तै थियो । शम्शेरले पनि कोशिस गर्नुभयो । एजेन्टले झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने कुरा सुनाएपछि भने शमशेरको विदेशमा कमाउने सपना एक पटकका लागि सकियो ।
एजेन्टले महिला विदेश जाँदा भने थोरै पैसा लाग्ने आश्वासन दिए । श्रीमान् जाँदा भन्दा लागत कम लाग्ने भएपछि ८० हजार रुपैयाँ बुझाएर शान्ता आफै २०६५ सालमा साउदी उड्नुभयो । दुई छोरा र घर व्यवहार शमशेरले सम्हाल्नुभयो ।
‘खेतीपाती केही छैन हाम्रो, नकमाए त घरमा पनि चुलो बल्दैन,’ शान्ता दुई छोरा छाडेर परदेश जानु पर्ने बाध्यता सुनाउनुहुन्छ । घरेलु काममा साउदी पुगेकी शान्ताले सोचेजस्तो कमाउन सक्नुभएन । दुःखजेलो तीन वर्ष बिताएर फर्किनुभयो ।
शान्ता नकमाइ फर्किएपछि कमाएर फर्किने आश बोकेर शमशेर आफै लाग्नुभएको थियो साउदी । तर सधैं सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ! शम्शेरलाई झन आपत आइलाग्यो ।
‘मेरो हातमा सुन बनाउने सीप थियो, यही त्यही काम गरेर बसेको भए पनि हुने रहेछ,’ शमशेर पछुतो मान्दै भन्नुहुन्छ, ‘यस्तो हुन्छ भन्ने के थाहा र ? नत्र ज्यानभन्दा ठूलो धन त कसलाई हुन्थ्यो र !’
बिराटनगरको नोबल हस्पिटलमा शमशेरले डायलायसिस गराइरहनुभएको छ । ‘कसैले मृगौला दिएनन् भने मेरो सास कहिले निभ्छ थाहा छैन, तर म बाँच्न चाहन्छु, यदि मलाई केही भयो भने पनि सरकार मेरो परिवार चाहिँ बचाइदेउ !’
थाइल्याण्ड टाइगर टेम्पल: स्थानान्तरणका कारण आधाभन्दा बढी बाघ मृ...
वैदेशिक रोजगार पीडितलाई भदौ महिनामा विभागले भरायो अहिलेसम्...
संखुवासभामा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएकी महिलाको शव भेटियो
च्याम्पियन्स लिग : बुधबार रियल मड्रिड र पीएसजी प्रतिस्पर्धा गर्दै
दशैँमा घर जाने यात्रुको सुविधाका लागि घुम्ती अनुगमन टोली
कसैले गर्ने विरोधलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन : नेता श्रेष्ठ
तिम्बुङ क्षेत्रमा सीसी क्यामेराको निगरानी : अवैध जडिबुटी निका...
काभ्रेमा घर भत्किँदा ५ वर्षको बालकको ज्यान गयो
अझै केही दिन फरक बैंकको एटीएम कार्ड नचल्ने: पीओएस मेसिनबाट ...
वर्षाले नेपालगञ्जका विभिन्न ठाउँ जलमग्न
मुस्ताङको स्याउ बजारमा, खरिदका लागि व्यापारी बोटमै
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग अवरुद्ध
नयाँ संसद भवनको शिलान्यास आज, तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने
कोरियन वन र मलेसियन रिंगिटको भाउ घट्यो
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा शनिबार जे देखियो...
काभ्रेमा एकैपटक चार वटा हेलिकप्टर धानखेतमा आकस्मिक अवतरण, सबै यात्रु सकुशल
एकै ठाउँमा उभिएर मन्त्रीविरुद्ध आक्रोश पोख्दा विमान ढल्किएको थियो : बुद्ध एअर